4 nzvimbo dzekuisa dhesiki diki kumba | Bezzia
4 nzvimbo dzekuisa dhesiki diki kumba
Maria vazquez | | Musha
Mazuva ese isu tiri kudarika tinoshanda tiri kumba. Kunyangwe zvisingaiti kuita kudaro kuve nekudiwa kwekugadzira diki nzvimbo munzvimbo yelaptop uye kuita akasiyana maitiro. Zvino sezvo zvese zvaitwa uye zvichidzorwa pamhepo, kuve nenzvimbo yakadai kiyi yekuita aya mabasa zvakasununguka, haufunge?
Havasi vedu tese tine, zvakadaro, imwe yekuwedzera kamuri yekugadzira diki kudzidza, kana hombe nzvimbo yekugadzira nzvimbo yebasa. Dzimwe nguva, zvakafanira kufungisisa nzvimbo dzinopfuura dzechinyakare kusvika isa dhesiki diki. Uye ndidzo nzvimbo dzekuisa tafura diki yatinofungisisa nhasi.
Hazvina basa kuti uve nenzvimbo hombe yekugona kushanda zvakanaka, asi kuti ive yakarongeka. Tafura 80 cm kureba uye 40 cm. kudzika kunogona kukwana ku shanda zvakanaka mamwe maawa. Unogona kuitenga kana kuzviita iwe pachako nebhodhi uye mamwe makumbo kana zvitsigiso, chengeta izvo mupfungwa!
1 Kuseri kwesofa
2 Panzvimbo yechigadziko chehusiku
KuBezzia tinonyatsoda pfungwa yekuisa tafura seri kwesofa mumba yekutandarira. Iyo nzvimbo inotibvumidza isu tora mukana wenguva yakareba yesofa uye kudzikisira kudzika zvishoma nekuda kwehurefu uhu. Tinogona zvakare kuisa mamwe masherufu pasi payo kuisa izvo zvatinoda kuti tishande, tichichengeta pakaunda pakajeka patisinga.
Rudzi urwu lwenzvimbo rwakanakira kupindura maemail mashoma kana kuita mamwe maratidziro, asi inogona kunge isiri iyo yakakodzera kwazvo kushanda kana isu tisina kurangwa uye / kana paine vana pamba. Kuisa nzvimbo yebasa munzvimbo yakajairika haisi nguva dzose iri zano rakanakisa mumhuri hombe.
Panzvimbo yechigadziko chehusiku
Imba yekurara inzvimbo yega yega uye yakanyarara kupfuura imba yekutandarira. Tinogona kuisa dhesiki diki munzvimbo ino munzvimbo yeimwe yematafura epamubhedha, chero bedzi tine zvishoma. Tafura yakajairwa ndeye 45 cm kureba uye isu tinoda kanenge 70 cm. kuitira kuti ushande.
Kuvanzika Iyo ndeimwe yesimba reiyi imwe sarudzo, asi isu tinowanawo mamwe "mabhut" mairi. Kana tichida kushanda husiku uye tisingarare tega, tinogona kukanganisa mumwe wedu. Uye zvakare, hazvikurudzirwe kuve nekombuta ichionekwa mukamuri yekurara sezvo inogona kukanganisa maawa edu ekuzorora sezvinoita nharembozha.
Masitepisi kashoma kutora mukana zvinobudirira mudzimba. Hatizvitore! Zvinotipa mukana wekuwedzera nzvimbo yekuchengetera, asiwo kugadzira basa kana kuverenga makona ayo mhuri yese inogona kunakidzwa.
Isa a tafura uye mamwe masherufu etsika Iyo ndiyo nzira yakangwara yekushandisa mukana uno. Sezvo chigaro chinogara chakaunganidzwa pasi pematanho, ino nzvimbo haizokanganisa kufamba kwakajairika kweimba. Uye inzvimbo ine hungwaru yekushanda, kunyangwe nevana pamba kana vangorara.
Kana iwe uine koridho yakawedzera kupamhama kupfuura zvakajairwa, iwe une mhanza! Iwe unogona kuba imwe nzvimbo kubva pane ino kuti uise tafura yakatetepa uye mamwe masherufu. Iwe unogona kunyange kubheja pane imwe tafura yekupeta kuubatanidza nemasherufu makumi maviri. yakadzika pane imwe nhanho yekusiya zvinhu zvachose.
Une mukoridho wakamanikana here? Zvese hazvina kurasika! Zvimwe unogona tora mukana wekupera kwekoridho kugadzira diki rekushandira. Kana iwe usina musuwo, unogona kugadzira makona madiki senge ari mumufananidzo. Une kabhodhi munzvimbo iyoyo here? Unogona kuivhura uye kutora mukana wegomba kuisa tafura uye mamwe masherufu.
Idzi hadzisi chete nzvimbo dzaunogona kuisa dhesiki diki, asi isu takaona zvichinakidza kugovana izvi nekuti hadzisi nzvimbo dzakajairika dzatinogona kufunga nezvepamberi. Ivo havana kukwana, asi vanogona kusvika pairi vachida.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Musha » 4 nzvimbo dzekuisa dhesiki diki kumba
Iyo Gunyana inotanga kuratidzwa pamapuratifomu ausingakwanise kupotsa
Sinamoni plamu keke